July (20) June (24) May (30) April (19) March (20) February (28) January (20) Beeraha iyo Xoolaha QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha nool oo laga soo diyaariyay magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo Bandiiradley ee gobollada Nugaal iyo Mudug. Faaudmo Macallin Abuukar ayaa soo jeedineysa....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Baardheere iyo Afgooye. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sayladaha Gaalkacayo iyo Gelinsoor oo gobolka Mudug ah iyo Eyl oo gobolka Nugaal ah. Waxaa soo kala diray weriyayaasheena Jibriil Cismaan Cilmi iyo Cab...
Beeralayda Jowhar oo diyaarsanaya beeraha si ay uga faa'iidaystaan xili roobaadka Beeralayda Jowhar ee waraabka ayaa diyaarsanaya kanaalada si ay ugu diyaar garoobaan waraabka xilli roobaadka gu’ga ee foodda inagu soo haya, weriyaheena Maryan Sheekh Cabdi ayaan booqatay beera...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee maanta waxaan ku eegeynaa seyladaha Buuhoodle iyo Muqdisho. Waxaa soo kala diray weriyeyaasheenna Khadar Cawl iyo Aweys Xaaji, waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray seyladaha magaalooyinka Garoowe iyo Baargaal. Waxaa soo jeedinaysa Fowzia Cumar....
Laascaanood: Haweeney beerteeda ku badbaadisay biyo deyn ah (ERGO) - Farxiya Aadan Maxamed oo ah 35 sano jir leh siddeed carruur ah, waxay ka mid tahay beeraleyda deegaanka Ooda-gooye oo 6km koofur-bari ka xiga magaalada Laascaanood. Beerteeda keliya ayaa...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Afgooye iyo Saakow....
Haweenay beerteeda ka badbaadisay inay qalasho Halkan ka dhegeyso warbixin ku saabsan haweeney beeraleey ah oo ku nool deegaanka ooda-gooye oo Laascaanood ka xiga dhanka bari ayaa ku guuleystay inay badbaadiso beerteeda waliba geed miroodka. Deega...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray seyladaha magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaysa Fowzia Cumar....
11 APR 2017 QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo qayb ka ah baahinta idaacadda Ergo oo maalinba lagu soo qaato qiimaha lagu kala iibsado xoolaha suuqyada qaar ee dalka. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macal...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo aan ku eegeyno suuqyada magaalooyinka Jowhar iyo Boorame. Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Taysiir....
Qiimaha xoolaha ee seyladaha Garoowe, Eyl iyo Gaalkacyo Xubintan oo qeyb ka ah idaacaddeenna maalinlaha ah ayaa marba waxaan qeyb ku soo qaadannaa qaar ka tirsan seyladaha kala duwan ee magaalooyinka Soomaaliya. Weriyeyaasheenna ayaa booqda seyladaha meela...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sayladaha degmooyinka Afgooye iyo Luuq oo ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Gedo. Waxaana soo kala diray weriyayaasha Axmed Cumar Saalixi ...
Puntland oo hiigsaneysa inay daweyso 2.5 milyan oo xoolo ah (ERGO) - Gobollada hoos taga maamulka Puntland waxaa ka socda olole lagu daawaynayo 2.5 milyan oo neef oo ka mid ah xoolaha Puntland, waxaana hawshan oo soconaysa muddo 45 cisho ah uu soo gebo-ge...
04 APR 2017 Akhri
Arday barta xannaannada xoolaha oo daryeelaya xoolaha reer-guuraaga (ERGO) - Arday isugu jira wiilal iyo gabadho sanadkan ka baxaya kulliyadda xannaannada xoolaha ee jaamacadda Hargeysa ayaa si tabarrucaad ah u daweynaya xoolaha ay abaartu saameysay ee ay la soo ...
Qiimaha xoolaha ee seyladaha Muqdisho iyo Buuhoodle Weriyeyaasheenna jooga gudaha Soomaaliya ayaa maalin kasta noo soo dira xogta qiimaha xoolaha ee seyladaha Soomaaliya. Wxaan maanta ku soo qaadanaynaa qiimaha xoolaha lagu kala iibsanayo ee seyladaha ...
Kismaayo: Qiimaha xoolaha oo hoos u dhacay (ERGO) - Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ee seyladda magaalada Kismaayo ayaa lagu soo warramayaa inuu u yimid hoos-u-dhaca. Xoolaha seyladda la keenayo waa kuwo caato ah oo daaq-la’aan iy...
03 APR 2017 Akhri
Qiimaha Xoolaha ee qaar ka tirsan seyladaha Soomaaliya (ERGO) - Mala socotaa qiimaha xoolaha nool lagu kala iibsado ee suuqyada Soomaaliya. Raadiyo Ergo waxay fursad kuu siineysaa inaad ogaato qiimaha ay xooluhu ka joogaan seyladaha Boosaaso, Qardho ...